तपाईमा यी ५ संकेत छन्, उसो भए तपाईं बुद्धिमान हुनुहुन्छ !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Thoughts/तपाईमा यी ५ संकेत छन्, उसो भए तपाईं बुद्धिमान हुनुहुन्छ !!
एजेन्सी । संसार`भरका मानिसमा सबैमा अलग्गै विशेषता हुन्छ । मार्क`सिटमा हुने अं`कको आधारमा व्यक्ति कत्तिको बुद्धिमान छ भ`न्ने जा`न्न सकिंदैन । किनकी हरेक मानिस कुनै एउटा पाटोमा बुद्धि`मान हुन्छ । दिमागको भाग र कामलाई विभि`न्न वैज्ञा`निकले अलग अलग काम तथा हि`स्सा`मा बाँडेका छन् । कसैले दिमागलाई तीन भागमा बाँडेका छन् त कसैले छ भागमा ।
तर, जुनसुकै हिसाबले बाँडेतापनि हरेक व्यक्तिको दिमाग कुनै एउटा भागमा स`क्रिय पाइन्छ । प्राय स्कुलहरुमा राम्रो अं`क ल्याउने विद्यार्थी`हरु अगाडी बेञ्चमा बस्ने गर्छन् । अगाडी ब`स्ने विद्यार्थीहरुलाई बुद्धि`मान भनिन्छ । तर, वास्त`वमा अगाडी बेञ्चमा बस्ने विद्यार्थी भन्दा पछाडी बस्ने विद्या`र्थी बुद्धि`मान हुन्छन् ।
अगाडी बस्ने विद्या`र्थीहरु अरुले सिकाएको कुरा टिप्न सक्ने हुन्छन् तर पछाडी ब`स्ने विद्या`र्थीहरु जिन्दगीको जुनसुकै लडाई लड्न सक्ने हुन्छन् । उनीहरुमा एकै पटक धेरै काम गर्ने क्षमता समेत हुन्छ ।बुद्धिमान व्यक्तिहरु खुशी देखिन्छन् । उनीहरु मुस्कुराउन मन पराउँछन् र अरुलाई पनि हाँसेको हेर्न चाहन्छन् ।
पीरमा परेको व्यक्तिलाई समेत उनीहरु हँसाउने प्रयास गर्छन् । तर पनि उनीहरु कुनै चिन्तनमा पनि डुबेका हुन्छन् । बुद्धिमान व्यक्तिहरु धेरै सोंच्छन् । उनीहरु कुनै कुराको विश्लेषण गर्ने र निर्णय लिंदा धेरै सोंचेर लिने किसिमका हुन्छन् । बुद्धिमान व्यक्तिहरु आफू`लाई माया गर्ने, आफैमा हराउन सक्ने हुन्छन् ।
उनीहरुलाई साथी नभएता पनि दिन काट्न सम`स्या हुँदैन । एउटा पुस्तक पढेर नै उनीहरुले आफ्नो दिन काट्न सक्छन् । उनीहरु रचना`त्मक हुने हुनाले आफू भित्र हरेर कुनै कुरामा डुब्छन्, जसले गर्दा उनी`हरुलाई साथीको अभाव मह`सुस हुँदैन । धेरैजसो बुद्धि`मान व्यक्तिहरु देब्रे हात प्रयोग गर्ने हुन्छन् ।
कोरोना संक्र`मित बाग्लुङकी अंशु सापकोटाको एक्कासी आयो यस्तो खबर !